That's so good, right?: Danny's Father, Kyle.
ကျွန်တော့်နာမည်ကို Chris လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အခုပြောပြမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးက ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Danny နှစ်ယောက်သား သူ့ဖခင်ဖြစ်သူ Kyle ဆီ သွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Danny အဖေ Kyle က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို Florida မှာရှိတဲ့ သူ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို လာလည်ဖို့ ဖိတ်တာ တစ်ပတ် လောက် ရှိပါပြီ။ သူ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ လမ်းခွဲထားပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေတာ ၁၅နှစ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက သူ့အမေနဲ့ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်သည်အထိအတူနေထိုင်ခဲ့တာလေ။ အခုတော့ သူက သူ့အဖေနဲ့အတူနေဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Danny နဲ့ ကျွန်တော်က အသက် ၂၂နှစ်ကိုယ်စီရှိနေကြပြီး Kyle ကတော့ အသက် ၄၃နှစ်ရှိပါသတဲ့။ သူအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပဲ Danny နဲ့သူ့ညီမလေးကို တော်တော်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အရွယ်မှာ လက်မထပ်အတူနေပြီး မွေးဖွားခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်တော်သိတတ်စ အရွယ်ကစလို့ Danny နဲ့အတူကြီးပျင်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒယ်ဒီတို့ဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းလာပြီးမှ ကျွန်တော့်ကိုမွေးခဲ့တာလည်း ပါတယ်ဗျ။ Kyle ကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအဖေလို့သိရှိမှတ်မိလိုက်ရုံလေးပါပဲ။ မကြာခင်သူကပြောင်းရွှေ့သွားတာကိုး။
အိုး….တော်တော်စွဲဆောင်မှုပြင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ကြွက်သားတွေပြည့်နှက်နေတာထက်စာရင် တော်တော်ကြံ့ခိုင်ပြီးအချိုးကျတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူ့မျက်နှာက နုပျိုတော့ သူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာ တကယ့်ကိုမှန်းဆလို့မရတာပါ။ မကြာခဏ ဆိုသလို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့သူ့ကို သားအဖလို့ကိုမမြင်မိဘူး ညီအစ်ကိုလို့ပဲတွေးထင်လက်ခံမိတယ်ဗျာ။ ဟဲဟဲ ပြီးတော့သူက လူငယ်ဆန်တဲ့ အ၀တ်အစားမျိုးတွေကို အလန်းစားဝတ်တာအမြဲလေ။ သူအမြဲလိုလို ဂျင်းဘောင်းဘီအကောင်းစားလေးတွေကို ၀တ်တယ် (လုံးဝန်းကျစ်လစ်နေတဲ့ သူတင်သားဆိုင်တွေကိုအလှပြတဲ့အနေနဲ့လားမသိ)၊ မကြာခဏဆိုသလို ထသွားထလာရှပ်အကျီလေးတွေကို အပေါ် ကြယ်သီးလေးဖြုတ်ပြီး စတိုင်လ်မိမိဝတ်တတ်တယ်။ သူက တကယ့်ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ပိုက်ဆံကတော့ သိပ်အရှိ ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို ညစာစားဖို့အပြင်ကို မကြာခဏခေါ်သွားနိုင် ပြီးတော့ သူနေတဲ့ အနောက်အလယ်ပိုင်း မှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုနဲ့လျော်ညီတဲ့ တတ်နိုင်မှုမျိုးတွေကိုသာပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ကွန်ဒိုကိုရောက်ရောက်ခြင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့အထုပ်အပိုးတွေကိုစတင်ဖြေထုတ်နေရာချကြပါတယ်။ ဒီကွန်ဒိုက အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတော့ တစ်ခန်းကို ကျွန်တော်နဲ့ Danny မျှသုံးကြရပါရော သိပ်ပြီးခွဲဝေခွင့်မှမရှိတာ။ ဟိုးအရင် ခရီးလေးတွေအတူထွက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတုန်းကလည်း ဒီလိုအိပ်ယာတစ်ခုထဲအတူမျှအိပ်ခဲ့တာမျိုးဆိုတော့ ရိုးနေပြီပေါ့နော်။ တစ်အိပ်ရာထဲ အတူတူ -ွင်းထုကြတယ် အပြာရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖြစ်ကြတယ် ဟိုသည်အကြောင်းပြောဖြစ်ကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ် ယောက်သားကြားမှာ ဘာကိစ္စမှ ထူးထူးထွေထွေ မဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်ကတည်းက ကျွန်တော် ဂေးဆိုတာကို Danny သိခဲ့ပြီးသားပါ။ သူမကြာခဏပြောလေ့ရှိတဲ့စကားက `မင်း ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ပဲအိပ်အိပ် မင်းက ငါ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပဲ၊ ဘယ်အကြောင်းအရာကမှ ဒါကိုပြောင်းလဲသွားစေမှာမဟုတ်ဘူးနော်´တဲ့။ အဲ….အဲ့ကိစ္စကို မင်းအဖေသိ သွားရင်ကောလို့ ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ သူက မသိလောက်ပါဘူးကွာ…တကယ်လို့သိသွားရင်လည်း သူ့အဖေက ဒါမျိုး တွေမှာ နားလည်တတ်မှာပါဆိုပဲ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မိတာတော့အမှန်ပါ…Kyle တစ်ယောက် ကျွန်တော်ဘာဆိုတာ သိနေပြီးသားလို့ ထင်နေမိတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ အထုတ်အပိုးတွေဖွင့် သူ့နေရာနဲ့သူနေရာချအပြီးမှာတော့ တစ်ခုခုစားဖို့အပြင်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟိုသည်ငေး စားသောက်ပြီး အခန်းပြန်ရောက်တော့ ဧည့်ခန်းထဲထိုင်ကြကာ Indiana Jones ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကြပါတယ် တခြား ဘာမှလုပ်စရာမရှိတာလဲပါတယ် တခြားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ရအောင်ကလည်း အဆုံးထိထိုင်မကြည့်ချင်ကြတာကြောင့်ပါ။ ဇာတ်ကားလည်းဆုံးရော နောက်ဘာကြည့်ကြမလဲ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ Danny ကတော့ အိပ်ယာထဲဝင်တော့မယ် ဒီခရီးမထွက်လာခင် အလုပ်တွေ တနေကုန်လုပ်လာခဲ့ရတာ နည်းနည်းအနားယူဖို့လိုနေပြီတဲ့လေ။ Kyle နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ နောက်တစ်ခုခုကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ် ကျွန်တော်တို့မှ မောပန်းနွမ်းနယ်တာတွေမရှိကြတာပဲ။ Danny တစ်ယောက် ကောင်းသောညပါနှုတ်ဆက်ပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲဝင်တံခါးပိတ်သွားတာနဲ့ နောက်ရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုစတင်ရွေးချယ်လိုက်ကြပါပြီ။
Florida က ရာသီဥတုနွေးနေတာဆိုတော့ ကျွန်တော် အားကစားဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ အိပ်နေရင်းဝတ်တီရှပ်အတိုလေးတစ်ထည် ၀တ်ထားပါတယ်။ Kyle ကလည်း boxer ဘောင်းဘီနဲ့ အဖြူရောင်တီရှပ်အပါးလေးတစ်ထည်ဝတ်ထားရော။ နှစ်ယောက်သား ဆိုဖာခုံ တစ်ခုတည်းမှာအတူထိုင်ရင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြတာမှာ မိနစ် ၂၀လောက်အကြာမှာ ကျွန်တော် Kyle ကိုတစ်ချက်အကြည့်ရွှေ့လိုက် တာမှာ မြင်လိုက်ရတာက သူ့လက်တစ်ဖက်ဟာ သူ့boxers ထဲရောက်နေတာကိုပဲ။
`အို…ဆောရီးဗျာ´ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က အသံထွက်တောင်းပန်ပြီး မျက်ဝန်းအကြည့်ကိုမြန်မြန်ပြန်ရွေ့ရပါတယ်။
`ရပါတယ်ကွာ….ငါ့အခန်းထဲ -ွင်းထုနေတုန်းမင်းဝင်လာတာမှမဟုတ်တာပဲ…ကိုင်ရုံကိုင်ထားတာပါကွ။ ယောက်ျားလေးတိုင်း ဒီလိုကိုင်ထားတာကို ကြိုက်တတ်ကြတယ် ဟုတ်ဘူးလားကွ?´ သူက ရယ်ကျဲကျဲအသံနဲ့ ရှင်းပြသည်ပေါ့နော်။
`ရက်စ်….ဦး ပြောတာမှန်ပါတယ်….စောင့်ကြည့်ပြီးဖမ်းသလိုဖြစ်သွားလို့ ဆောရီးဗျ´´
`ဒီလိုလုပ်နေတာကြောင့် မင်းနေရတာသက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ….ဦး ရပ်လိုက်ပါ့မယ်´
`အို..မဟုတ်တာ…ဦး နေတတ်သလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါဗျာ´ ကျွန်တော်တပြုံးပြုံးနဲ့တုန့်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
နောက် ၁၀မိနစ်လောက် ကြာပြီးနောက်တစ်ကြိမ်လောက် မျက်လွှာပင့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ သူ့ငပဲဟာ ဟနေတဲ့ဘောင်းဘီကြားက ပေါင်မှာကပ်နေရော။ ကျွန်တော် Kyle ရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
`ဟုတ်တယ် လေတိုက်နေပေမယ့် အရမ်းပူတယ်နော်´ ဒီလိုလေးပဲ သူ့ကိုပြန်တုန့်ပြန်ပြောနိုင်ပါရဲ့။
ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်ဇာတ်လမ်း ဘယ်အစီအစဉ်ကိုမှ အာရုံစိုက်ကြည့်မနေနိုင်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်…ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ စွဲဆောင်မှုပြင်းတဲ့ ဖေဖေ့ငပဲကိုကြည့်မြင်ပြီးနောက် ဘယ်အရာကိုမှ အာရုံစိုက်လို့မရတော့ပါ။ ကျွန်တော့်အမူအယာတွေ က တော်တော်သိသာနေပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် အမူအယာကောင်းတစ်ခုနဲ့တောင်ဟန်မဆောင်နိုင်လိုက်တာပါဗျာ။
Kyle က ရယ်သွမ်းသွေးပြီး ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ကာ ` ကြည့်လို့ရပါတယ်ကွ….အိုကေပါတယ်ဟ၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်က တစ်ခြား ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့-ီးကိုကြည့်ချင်သိချင်တာ သဘာဝပါပဲကွာ….သဘောကျကြည့်´တဲ့ပြောတယ်။
´Um…ကျွန်တော် Um….ကြည့်ရုံကြည့်တာပါ…အဲတာက´ ကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းမသိဘာပြောမိမှန်းမသိ ပြန်ပြောနေတာ မသဲမကွဲ။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကိုမြင်နိုင်မယ့်နေရာကိုရွှေ့ပြီးထိုင်လိုက်တယ်။ Kyle ကသူ့ငပဲကိုဆွဲကိုင်မလိုက်တော့ အမွှေးမရိတ်ထားတဲ့ သူ့ရွှေဥ တွေကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ လုံးဝန်းပြီးကြီးမားပါသည်ပေါ့နော်။
`ဟင်း….ငါ့ကောင်လေးထွားလာပြီ´ Kyle သူ့ငပဲတဖြည်းဖြည်းထွားပြီးမာလာတာကို သတိပြုမိအောင်ပြောနေတော့ ကျွန်တော်ပိုပိုပြီး အာရုံစိုက်မိပါတယ်။
`မိုက်တယ်ကွာ´ Kyle က သူဆော့ကစားနေတဲ့ပစ္စည်း သိသာထင်ရှားစွာဖောင်းကြွလာတာကို အားရဟန်နဲ့မြည်တမ်းတယ်။
တီဗီရှိရာဘက်ကိုမျက်နှာပြန်လှည့် မရိုးမရွဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကို လက်နှစ်ဖက်အားတင်းကြပ်စွာဆုပ်ကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဖြစ်နေ တာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။
`Oh My God! ဆောရီးပါဗျာ……´ကျွန်တော် တော်တော်တောင်ရှက်တက်တက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ Kyle ဘက်ကိုပြန်ပြီး မျက်တောင် ခတ်လိုက်တော့ သူက ဆိုဖာခုံကိုခပ်လျော့လျော့မှီထားကာ သူ့ငပဲသူကိုင်ပြီးဆက်ကစားရင်း ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြသဗျ။ ကျွန်တော် သူ့ မျက်နှာကိုရှိုးလိုက်….ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံကညီဘွားကိုငုံ့ကြည့်လိုက်နဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကလည်း ဘင်ခရာတီးဝိုင်းလိုပဲမြည်ဟည်းနေတာ။ ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှားဖတ်မိနေသလားမသိ ကြည့်ရတာ သူ့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော်ဆွဲကိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲ။
`မင်းလေးကိုင်ချင်ရင်….´ သူ့ငပဲကို လက်တစ်ဖက်ကဆုပ်ကိုင် ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကို တခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့အသာပွတ်သပ်ရင်း သူပြောတယ်။
သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်အား ဒုတိယအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ဖို့မလိုအပ်တာပါပဲ။
ကျွန်တော် သူထိုင်နေတဲ့နေရာရှေ့ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရှပ်အကျ င်္ီကိုချွတ်လိုက်ပြီးချိန်မှ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်လက်အစုံနဲ့ မရဲတရဲပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မှုစတင်လိုက်ရော။ သူ့ခါးစပ်က ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးလေးကို အသာကိုင်ရင်အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲချလိုက်တာ အိထွေးနေတဲ့သူ့တင်သားဆိုင်တွေက တကယ့်အမိုက်စားပဲဗျာ ရင်တွေအရမ်း ခုန်ရပါတယ်။ ဒူးဆစ်များ…..ပြီးတော့ ခြေဖ၀ါးအစုံကနေ ဘောင်းဘီကိုချွတ်ယူလိုက်ပါရဲ့။ သူ့ဒူးခေါင်းဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်ကို အသာကိုင်ပြီး နည်းနည်းကားအောင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ် ဒါမှ ကျွန်တော် သူ့ရွှေဥတွေကိုပါ လျှာကစားလို့ရမှာကိုး။
ကျွန်တော့် လျှာဖျားပူနွေးနွေးလေးဟာ သူ့ငပဲကြီးရဲ့ထိပ်ဖျားလေးကို အသာတို့ထိချိန်မှာတော့ Kyle နှုတ်ဖျားက တိုးတိတ်ညည်းညူသံ လေးတွေထွက်လာပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်း တစ်ဝိုက်ကို လျှာလေးနဲ့ရစ်ကာ ရစ်ကာဝိုက်…..ပြီးတော့ အောက်ခြေအထိ လျောကနဲ ပွတ်သပ်တာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ပေါ့။ ဟိုသည် တို့ထိကလိနေတာ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူ့ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကို ပြုသမျှ နုပါတော့မယ်လို့ သူတောင်းဆိုတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲဝယ် မာတောင့်နေပြီး သွေးကြောတွေခုန်နေတာ များ တဆတ်ဆတ်များဖြစ်ရော့သလားပဲ။ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝလေးဝယ် အရည်ကြည်တွေ တစိမ့်စိမ့် ရုတ်တရက်ထွက်ကျလာတော့ ကျွန်တော် သူ့ငပဲခေါင်းလေးကို ငုံထွေးမိတယ် အရသာလေးကမဆိုးပါဘူး။
`Fuck yeah!!´ သူ့နှုတ်ဖျားက တော်တော်မနေနိုင်အောင်ပဲ မိန်းမောညည်းညူသံတွေထွက်လာပါတယ်။ `သား….အင်း….မင်းလေးရဲ့ ပူနွေးနေတဲ့ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်ခွင့်ပေးမလား….ပေးမလားဟင်´
`မလုပ်ပါနဲ့ဦးဗျာ……ကျွန်တော် ဒီ့ထက်အရသာခံချင်သေးတယ်…ပြီးသေးနဲ့ဦး´ ကျွန်တော် ရဲသွေးနီနေတဲ့ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်း ပြောလိုက်တယ်။ သူ့ပေါင်တံနှစ်ဖက်ကို ပိုဖြဲကားနေအောင် အသာဆွဲပြီးနေရာထပ်ချဖြစ်ပါရဲ့။ `ဆိုဖာပေါ်မှာ ဒူးထောက်ပြီးရှေ့ကိုကုန်း လိုက်ပါလားဗျာ….ဦး…တင်ပါးတွေကို စားချင်လို့´လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူ အစကတော့ ချီတုံချတုံနဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့ ခဏနေတော့ ကျွန်တော် ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လိုက်နာပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် ဖွေးဖြူပြီးတင်းကားနေတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို တရှိုက်မက်မက်နမ်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့အရေပြားကနည်းနည်းတော့ ချွေးစို့နေသလိုပဲဆိုပေမဲ့ ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးနဲ့ အရသာက အံ့မခန်းပါ။ သူ့ခရေ၀က အနံ့တွေက မူးယစ်စေတဲ့ကိုယ်သင်းနံ့လေး ဆိုတော့ တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကိုအသာကိုင်ပြီး ခရေ၀ပေါ်အောင်ဖြဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ သူ့ခရေ၀ကို လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့တို့ပြီး စတင်သွေးစမ်းလိုက်တာ Kyle ဆိုတဲ့သူ ကျေနပ်မိန့်မူးမှုနဲ့အတူ ညည်းညူသံထွက်လာတာ Danny တစ်ယောက် မနိုးထ လောက်ပါဘူးလေ။ ကျွန်တော့်လျှာဖျားလေးကို မာတောင့်အောင်ကြိုးစား ခရေ၀ထဲထိုးသွင်းလိုက် ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုလျှက် လိုက်လုပ်တာပေါ့နော်။
`အိုး…မိုင်…ဂေါ့ဒ်…..မင်း…မင်းလေးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးချင်တယ်ကွာ…အ´ Kyle သူ့ပါးစပ်ကို ခပ်ဟဟဖွင့်ရင်းညည်းသလိုပြောတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော် သူ့ခရေကိုကလိနေရာကနေ ငပဲခပ်ရှည်ရှည်ဖွေးဖွေးကြီးဆီပြောင်းပြီး ဆံပင်တွေဝဲကနဲဝဲကနဲဖြစ်အောင် ကစားလိုက် ပါတော့တယ်။ ပူနွေးပြီး သွေးကြောတွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေတဲ့ အသားချောင်းကြီး ပါးစပ်ထဲတဆုံးဝင်လိုက် တဆုံးထွက်လိုက်ပေါ့။ သိပ်တော့ မကြာပါဘူး သူ့ငပဲ တင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်သွားကာ ကျွန်တော့်လည်မျိုတွေ လျှာတွေအနှံ့ သုက်ရည်ပူတွေကို ဖြန်းတော့ တာပါပဲ။ သူ့ချွေးနံ့ ကိုယ်သင်းနံ့အပြင် သူ့သုက်ရည်ရဲ့အရသာတွေက ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ခြောက်သွေ့သွားအောင်လျက်ပြုစေမိတဲ့ အထိ စွဲဆောင်မှုရှိလွန်းပါတယ်။ သူ့ကိုပြုစုနေရင်းနဲ့ ဆန္ဒတွေကထကြွလွန်းတော့ လက်တစ်ဖက်ကနေလည်း ကိုယ့်ငပဲကို ကိုယ်ကိုင် ကာ ခပ်သွက်သွက်ကစားရတာပေါ့နော်။ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရင်အုပ်ကိုကိုယ်ပြန်ပန်းရမှာပေါ့။
`ကောင်လေး မင်း….ငါ့အပေါ်ကို သုက်ရည်တွေဖြန်းပေးမလား´တဲ့ Kyle က အံ့အားသင့်စေတဲ့စကားကိုဆိုတယ်။ `အဲ…ရင်အုပ်တွေ ပေါ်ကိုပဲနော် မျက်နှာပေါ်မဟုတ်ဘူး´ဆိုပဲ။
ကျွန်တော် မြန်မြန်လေးထရပ်ကာ ငပဲကိုခပ်သွက်သွက်ကစားရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Kyle က ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲကိုင်ကာ ဒူးထောက်ထိုင် လိုက်ရင်း လက်ကစားပေးတယ်။ အို…..ဘယ်လိုပြောရမလဲ သူ့လက်ကစားတာက တစ်မျိုးပဲ ကျွန်တော့်ခြေဖျားတွေ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ခါသွားရလောက်အောင် တစ်မျိုးလေးပဲ…..နောက်ဆုံးတော့ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါကာ သူ့ရင်အုပ်တွေပေါ်ကို အများအပြား ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ် သုက်ရည်တွေကိုပေါ့။ ခဏလေးငြိမ်နေကြပြီးနောက်မှ သူ့ရင်အုပ်ပေါ်ကဟာတွေကို ကျွန်တော်လျှာနဲ့ လျက်ပြုရင်း သန့်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။
`ဆောက်ရမ်းမိုက်တာပဲကွာ…… ဦးဖြင့်ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး နှစ်ယောက်သားလုပ်ခဲ့တာတွေကို´ သူက စိတ်လှုပ်ရှားသံနဲ့စကား ဆိုတယ်။
`ဟဲ…..ဦး ကြိုက်တာကိုပဲ ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်….ကျွန်တော်ဒီမှာနေတုန်း ထပ်လုပ်ကြတာပေါ့ တစ်ချိန်ချိန်´
`သိပ်သေချာတာပေါ့….ဒါပေမဲ့ လျော်ကြေးတစ်ခုခုတော့ မမျှော်လင့်ရဘူးနော်…..ဦးဒီလိုကိစ္စမျိုးလုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်မဖြစ် မသေချာလို့´
ကျွန်တော် သူ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်စွာ ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီး ` အိုး..ရပါတယ်ဗျ….ကျွန်တော့် ငပဲနှင့် တင်သားဆိုင်တွေကိုအသုံးချပြီး ပျော်စရာရှာရတဲ့ ဒီကိစ္စကိုသဘောကျပါတယ်….နောက်တစ်ခါ ဦး ကျွန်တော့်ကို -ိုးပေးနော်´
နှစ်ဦးသား မျက်နှာခြင်းဆိုင်ထိုင်….အပြုံးခြင်းဖလှယ်ကြရင်း အိပ်ယာကိုယ်စီဝင်ကြဖို့ စဉ်းစားလိုက်စဉ်မှာပဲ….
`ကျွီ….ဒုန်း´ အိပ်ခန်းတံခါး ဆောင့်ပိတ်သံနဲ့အတူ ခြေသံခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ခုက..……..…။
Alex Aung (9 June 2014)
Note: Just foraFun Short Story.